लकडाउनमा चौबिसै घण्टा सँगै हुँदा जोडीलाई पर्न सक्छन् यस्ता आपत्
आयोमेल संवाददाता काठमाडाैं - बिहीबार, भदौ ४, २०७७
सेक्स र रिलेसनसिप थेरापिस्टहरूका लागि लकडाउनको समय निकै फलिफाप भएको छ। जोडीहरू महिनौंदेखि एकअर्कामा हेलिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ।
तर, समस्या यहींबाटै सुरु भएको हो।
प्रसिद्ध यौन परामर्शदाता च्यारिटी रिलेटले गरेको सर्वेक्षणअनुसार जोडी बाँधिएर बस्ने करिब एक चौथाइ मानिसले यतिबेला आफ्नो सम्बन्धमा दबाब झेलेका छन्। पार्टनर भएका हरेक आठमध्ये एकभन्दा बढीले आफ्नो सम्बन्धमाथि नै शंका गर्न थालेका छन्।
रिलेटका प्रमुख कार्यकारी आइदान जोन्स भन्छन्, ‘कोही कोहीका हकमा लकडाउनले नजिक तुल्याएको महसुससमेत गराएको छ तर धेरैका लागि चाहिँ पहिले व्यवस्थापन भएर आएका समस्याहरू नै सतहमा आएर समस्या हुन थालेको छ।
लकडाउन सुरु भएपछि रिलेटले आमनेसामने परामर्श बन्द गरेको थियो। र, डिजिटल सेसनबाट परामर्श लिनेहरू चाहिँ झन् बढे। ‘डिजिटल सेसनमा मानिसहरू झन् खुलेका छन्,’ आइदानले भने।
रिलेटले यसै सन्दर्भमा आफ्ना विशेषज्ञ र ग्राहकहरूबीचको संवादका आधारमा केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिएको छः
पहिलेजस्तो लकडाउनमा किन सेक्सप्रति रुचि हुन्न!
धेरै मानिसले यौन रूचिमा परिवर्तन भएको अनुभव सुनाएका छन्। वास्तवमै जीवन नै धेरै बदलिएको छ। मानिसहरू घरबाटै काम गरिरहेका छन्। चौबिसै घण्टा घरमा बसेपछि यौनइच्छामा कमी त भइहाल्छ नै।
मानिसहरू बाहिर निस्कनै पाएका छैनन्। बाहिरको दृश्य हेर्नै पाएका छैनन्। राति डेट जाने कुरा एकादेशको कथा जस्तो भइसक्यो।
अर्कातिर व्यावहारिक पक्ष पनि हेरौं। घरमा बसेर पनि कति काम, कति झन्झट हुन्छ। काम, बच्चाबच्ची र सरसफाइ। खाना नै बढी खाइन्छ, व्यायाम कम छ, लुगाफाटामा पनि ध्यान दिइन्न। यसले गर्दा हामीले आफूले आफैंलाई सोच्ने तरिका पनि फरक पर्न जान्छ। र, यौनइच्छा त्यसै कम हुनसक्छ।
अब तपाईं र तपाईंको पार्टनरलाई यौनइच्छा कम भएको जस्तो भएर समस्या भएको छ भने त्यसलाई बढाउने कसरी भनेर सोच्नुपर्छ। घरमै केही रमाइलो गर्न थाल्नुप¥यो। जिस्कनुप¥यो। बिछ्यौनामा बस्दा केही आकर्षक लगाउनुप¥यो। केही चिजको सूची बनाउनुप¥यो, जसले तपाईंलाई रोमान्चित तुल्याओस्।
राम्रो महसुसी, आनन्दीले मानिसलाई रचनात्मक बनाउँछ र यौनइच्छा पनि जागृत गराउँछ।
वर्षौंपछि निरन्तर साथ हुँदा कुरा नमिल्ने रहेछ, किन?
लकडाउनमा एकसाथ बसिरहँदा धेरैलाई झर्को नै लाग्ने। पहिलेजस्तो आकर्षण पनि छैन, न झगडा नै। यति लामो समय काम, करिअर भनेर आ–आफ्नो करिअर भागदौड गर्दा केही कुरा नमिलेजस्तो हुन्छ, यतिबेला।
वास्तवमै यो एकदमै निरस अनुभव हो। यसले अर्कातर्फ आफैंलाई झस्काउँछ पनि। एउटा कुरा सत्य के छ भने कुनै पनि कुरा सँगसँगै गर्ने बानी छुटेको धेरै भइसकेको हुनसक्छ।
त्यसैले एकअर्काबीच आकर्षण पनि हराउन सक्छ, कुनै कुरा नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ।
अब यसो गर्नुप¥यो। तपाईं सम्झनुहोस्, पहिलोचोटि डेट गर्दा के के मिहिनेत गर्नुभएको थियोरु तर समयक्रममा त्यो सबै त भुल्दै जानुभयो। अब फेरि त्यही गर्न थाल्नोस्, सबै कुरा मिल्दै जान्छ।
निरन्तर नृत्यजस्तै हो
सँगै खाना बनाउनोस्। एउटालाई मात्र काम नछाडनोस्। नयाँ रेसिपीतिर जानोस्। गेम खेल्नोस्। दुवैलाई मनपर्ने गीत बजाउनोस्।
तपाईंको पाटर्नर अहिले जे छ पक्कै पहिले त्यो थिएन। धेरै परिवर्तन समयले गराउँछ। उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भन्ने थाहा
पाएजस्तो नगर्नोस्। यो त निरन्तर नृत्य जस्तै हो, अर्काको तालमा आफू मिसिनै पर्छ।
पार्टनरको फोनमा सेक्स्ट भेटियो, यस्तोमा के गर्ने?
सबैभन्दा पहिले आफ्नो मन सम्हाल्नोस्। तपाईं निरास हुनुहुन्छ, सम्भवतः। संसार भित्रैबाट चर्केर फुटेजस्तो लाग्छ। लामो लामो सास फेर्नोस्। भित्रदेखि हुँडलिएर आउने भावनालाई समय र स्थान दिनोस्। कहीं एकान्तमा गएर बस्नोस्, पिउनोस्। जस्तो कार।
तपाईंको विश्वासमा घात भएको छ। यो त रातारात सुध्रने कुरा होइन। मन मिल्नेहरूसँग सल्लाह गर्नोस्, परिवारसँग सम्र्पकमा रहनोस्। जब आफ्ना पार्टनरसँग कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, तब सबै कुरा शान्त ढंगले भन्नोस्। पूरै दिल खोलेर।
विश्वासघातको उपचार हो इमान्दारिता दुवैतर्फ। ठिक सूचनालाई आधार मानेर थाहा पाउन जरुरी छ, पार्टनरले त्यसो किन ग¥यो भनेर। त्यसपछि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि दुवैले आफ्नो सीमा मनन गर्न आवश्यक छ। किन एकले अर्कालाई माया गरेको भनेर सम्झाउन आवश्यक पर्छ। यसले गर्दा सम्बन्ध बच्न सक्छ, इमान्दारिता निरन्तर हुनसक्छ।
वास्तवमै एकले अर्कालाई नराम्रोसँग ‘जज’ गर्ने काम गर्नै हुन्न। गालीगलौजले एकअर्काबीच खुल्न दिँदैन। यौनका बारेमा एकअर्काप्रति आदर राखेरै पनि गफ गर्न सकिन्छ। एकअर्काबाट के पुगेन, के एकसाथ गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गर्न सकिन्छ।
नोकरी गुम्ने चिन्ताले यौनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्नसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नकरात्मक समाचार सकेसम्म नसुन्नेतिर लाग्नुपर्छ। किनकि पर्ने असर त सबैलाई परिहाल्छ। चिन्ता कम गर्न सकियो भने समाधान चाँडै निस्कन्छ।
पार्टनर अर्कातिर सल्केको थाहा भयो भनेर?
आफूसँग २४ घण्टा समय बिताइरहेको मानिसले धोका दिएको थाहा भयो भने निकै गाह्रो हुन्छ। यस्तो बेला कसैबाट सहयोग नपाउने स्थिति पनि हुनसक्छ।
त्यसैले आक्रोशमा कुनै निर्णय गर्नुहुन्न। बरु एउटै घरभित्र शान्त भएर बस्ने, झगडा नगर्ने तर फरक फरक कोठामा सुत्ने बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ।
अनलाइन थेरापी लिने एवं एकअर्काका लागि नियमबद्ध रहने कोसिस गर्नुपर्छ। केटाकेटी छन् भने उनीहरूसामु झगडा गर्ने काम गर्नुहुन्न। र, विस्तारै किन धोकाधडी भयो भनेर छलफल गर्न सकिन्छ। यसमा खराबको बिल्ला लगाइहाल्नु जरुरी छैन।
इमान्दारितालाई पुनर्आश्वस्त गराउने कोसिस हुनसक्छ। निरन्तर धोका भएको अवस्थामा कम्तीमा आंशिक स्वीकारोक्ति आउन सक्छ। तर यस्तोमा धेरै नलाग्ने, बरु सम्बन्धलाई धोकाले पारेको असरबारे खुला छलफल गर्ने।
सम्बन्धको पुनर्निर्माण पनि हुनसक्छ, समस्यालाई गहिर्याउँदै जानैपर्छ भन्ने छैन। तर खुला छलफल हुनुपर्छ। जे जस्तो भए पनि आफ्नो ख्याल बढी गर्ने, कुनै कुलततिर नबरालिने।
–द सनबाट अनुवादित
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ४, २०७७